बोनी कपुर छोरीको फिल्म हेरेर भावुक, श्रीदेवीलाई सम्झिए
बलिउड – बलिउड नायिका जान्ह्वी कपुरको फिल्म यो सातामा हलहरुमा रिलिज भएको छ । हार्दिक मेहताले निर्देशन गरेको फिल्ममा राजकुमार राव र वरुण शर्मा पनि
गायनबाट सन्यास लिँदै सेलेना गोमेज !
न्यूयोर्क । अमेरिकी चर्चित गायिका तथा अभिनेत्री सेलेना गोमेजले संगीतबाट सन्यास लिने सोच बनाएको बताएकी छन् । भोग म्यागजिनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले यस्तो बताएकी हुन् । अप्रिल महिनाको भोगको कभर
पछिल्लो समय सहरमा बुटिकहरु धमाधम खुल्न थालेका छन् । आम मानिसमा फेसनप्रति चासो र रुचि बढ्दै गएपछि बुटिकहरु फस्टाइरहेको छ । यस्तै केही महिनाअघि मात्र फेसन डिजाइनर प्रविना केसीले कुपण्डोलमा
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइराला भजनकीर्तनतिर लागेकी छन् । महाशिवरात्रिको अवसर पारेर मनिषाले ‘महामृत्युञ्जय’ भजन सार्वजनिक गर्दैीछन् । केही दिनअघि मात्रै उनले आफ्नो स्वरमा रेकर्ड गराएको उक्त भजन नेपाल
डिकस्मोको ब्राण्ड एम्बास्डरमा इन्दिरा
काठमाडौं । मानिसको सौन्दर्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट काम गर्ने डिकस्मो (D’cosmo) नेपालको ब्राण्ड एम्बास्डरमा गायिका इन्दिरा जोशी अनुबन्धित भएकी छन् । सौन्दर्य र छालासम्बन्धी उपचारका लागि डिकस्मो नेपाल अमेरिकन एस्थेटिकमा गायिका
गोरखा मिरकोटकी सरिता भारती आधा दशकदेखि गायनमा सक्रिय छिन् । उनको स्वरमा आधा दर्जन गीतिएल्बम आइसकेका छन् । सरिता दर्जनौँ गीतका गायिका हुन् । गायनसँगै मोडलिङ र पत्रकारितासमेत गर्दै आएकी
काठमाडौं । नेपाली फिल्मकी अभिनेत्री रेखा थापाले नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग भेट गरेकी छन् । रेखाले समाजिक संजाल फेसबुकमा तस्विर सार्वजनिक गर्दै विप्लवसँग भेटबारे जानकारी गराएकी हुन् । केही
काठमाडौं । कलेज अफ जर्नालिज्म एन्ड मास कम्युनिकेशनको आयोजनामा नवौं संस्करणको ‘नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिवल–२०२१’ (नाफ २०२१) का लागि नेपाली र अफ्रिकन फिल्म चयन भएका छन् । महोत्सब अध्यक्ष डा.
काठमाडौ । कवि तथा गीतकार डीपी दाहाल परिश्रमीको पुस्तक ‘अन्तर्मनका सुसेली’ र म्युजिक भिडियो ‘क्षितिजपारी’ सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौमा एक कार्यक्रमबिच पुस्तक र भिडियो एकसाथ सार्वजनिक गरिएको हो ।
काठमाडौं । संघर्ष, लगनशीलता र धैर्यता । यी तीन कुराले नै मानिसलाई सफलताको सिँढी चढाउँछ । चाहे व्यापार होस् वा राजनीति नै किन नहोस् संघर्ष अपरिहार्य छ । अझ समय